ဖင်လန်နိုင်ငံက နိုင်ငံပိုင် ကာကွယ်ဆေးသုတေသနကုမ္ပဏီ ထူထောင်မည် - Xinhua News Agency
ဖင်လန်နိုင်ငံ ဟယ်လ်စင်ကီမြို့ရှိ Messukeskus ပြပွဲနှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် ပြင်ဆင်နေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား မေ ၃၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဟယ်လ်စင်ကီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဖင်လန်နိုင်ငံ အစိုးရသည် နိုင်ငံပိုင် ကာကွယ်ဆေးသုတေသနကုမ္ပဏီ Finnvac Oy ထူထောင်ရန် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်က ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ရှိသူ ဖင်လန်နိုင်ငံ လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန (STM) မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။ ကျန်ရှိသော ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူမှာ ဖင်လန်နိုင်ငံ၌ ဒုတိယအကြီးဆုံး တက္ကသိုလ်ဖြစ်သော Tampere တက္ကသိုလ် ဦးပိုင်ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသစ်စည် ဖင်လန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဖူလုံရေးအင်စတီကျု (THL) နှင့် Tampere တက္ကသိုလ်ကာကွယ်ဆေးသုတေသနစင်တာ၏ ရှိနှင့်ပြီးသား ကာကွယ်ဆေးသုတေသနလုပ်ငန်းများကို စုပေါင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ကာကွယ်ဆေး သုတေသနတွင် ဖင်လန်နိုင်ငံ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု သေချာစေရန်နှင့် အားကောင်းလာစေရန်၊ “ကောင်းမွန်စွာ သုတေသနလုပ်ပြီး ထိရောက်၍ ဘေးကင်းတဲ့ ကာကွယ်ဆေးများ ရရှိနိုင်ရန်” အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ထို့ပြင် ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် ကပ်ရောဂါများကဲ့သို့သော ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များအတွက် ပြင်ဆင်ရန်နှင့် သုတေသနရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာစေရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်းအတွက် ဘတ်ဂျတ်တွင် ယူရို ၈,၀၀၀,၀၀၀ ခန့် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉,၀၀၀,၀၀၀) လက်ခံရရှိထားကြောင်း၊ ကနဦးမတည်ငွေနှင့် အကြိုဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်များအား ခြုံငုံမိစေရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း STM က ဆိုသည်။
ဖင်လန်နိုင်ငံသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်မတိုင်မီ ပြည်တွင်းကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဖင်လန်နိုင်ငံအနေဖြင့် တင်သွင်းသောကာကွယ်ဆေးများအပေါ်တွင်သာ အမှီပြုနေရသည်။ (၁ ယူရို = အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၁၃)
2021-12-03 06:45:47 Category：Medicine, Health
HELSINKI, Dec.2(Xinhua) — The Finnish government on Thursday approved the establishment of Finnvac Oy,astate-owned vaccine research company.
According to the press release, the intention is to secure and strengthen Finnish capabilities in vaccine research and to ensure that “well researched, effective and safe vaccines would be available to Finland”. Additionally, the aim is to prepare for health hazards such as pandemics and to increase research investments in Finland.
Photo : A healthcare worker prepares to administeradose of vaccine toawoman at the Messukeskus Expo and Convention Centre in Helsinki, Finland, May 31, 2021. (Photo by Matti Matikainen/Xinhua)